कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखाला की हैजा ? १० दिनसम्म आएन दिसा परीक्षणको रिपोर्ट « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०७८, मंगलवार १२:०५
२६ असोज, कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा खानेपानीको माध्यमबाट झाडापखाला फैलिएको पुष्टि भएको छ । रोग प्रभावित क्षेत्रबाट संकलन गरिएको पानीको १५ नमुनामध्ये ९ मा इकोली भेटिएको छ ।
परीक्षण भएको नमुनामध्ये नेपाल खानेपानी संस्थान बहादुरगञ्ज उपशाखाबाट वितरित धारा ‘पाइप लाइन’का १० र नल ‘चापाकल’ बाट पाँच नमुना संकलन गरिएको थियो । जसमध्ये पाइप लाइनका पाँच नमुना र नलका चार नमुनामा
इकोली भेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
केही दिनअघि शिवराज अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई हैजाको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो । अस्पताल निकट स्रोतबाट परीक्षण भएकामध्ये केहीलाई हैजा देखिएको बुझिएको छ । तर सोको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन । हैजा परीक्षणका लागि फेरि पाँच बिरामीको दिसाको नमुना काठमाडौं लगिएको छ । सुरुमा लगेको नमुना औषधि सेवन भएका बिरामीको भएकोले औषधि नखुवाइएको बिरामीको दिसाको नमुना परीक्षणका लागि लगिएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयले झाडापखालाका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा ४५ वर्षका पुरुषको घरमा, एक जना ७ वर्षीय बालकको निजी क्लिनिकमा र ५ वर्षीय बालिकाको अस्पताल ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको जनाएको छ । तर समुदायमा थप तीन जनाको झाडापखालाको कारण मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा शिवराज नगरपालिका-८ कोटवाका एक महिला, कृष्णनगर नगरपालिका सुखरामपुरका २७ दिनको एक शिशु र बहादुरगञ्जकी एक महिलाको गर्भ तुहिएको छ । २७ दिने शिशुको निमोनियाको कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
नसर्ने रोगबाट बच्न गुणकारी जमरा फलदायी
आज विश्व हातधुने दिवस : “अरुको ज्यान बचानुहोस्–आफ्नो हात धुनुहोस्” !
लामो यात्रामा गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन मन्त्रालयकाे आग्रह